ပျမ်းမျှဒတျချြစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်: အားလျော့ခြင်းနှင့် passive: မာတင် Vrijland
ပျမ်းမျှဒတျချြစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်: အားလျော့ခြင်းနှင့် passive
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ22019 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
သငျသညျအကြောင်းအရာဖတ်ရှုဖို့အားပေးတိုက်တွန်းနေကြသည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်အဖြစ်, ထို့နောက်သင်သည်အားနည်းခြင်းနှင့် passive မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ကြောင်းမပြောကြဘူး။ ဒါဟာအစသင်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ပဲစပ်စုနှင့်အတူသဘောတူဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုမူကားရဲ့ရိုးသားပါစေ: သင်တဝိုက်ကိုသင်ပျမ်းမျှလူဦးထင်ပုံကိုမမေးလျှင်, လူအပေါင်းတို့သည်အဘို့မိမိတို့ပခုံး shrug သူတို့နေဆဲမပွုနိုငျကွောငျးတှေ့သောဘုံပိုင်းခြေဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စကားလုံး '' အကောင်းမြင် 'နဲ့' positivism '' ကောင်းစွာလုပ်နေ (ကြည့်ရှု ဒီမှာ) တဖန်သင်တို့ထို့နောက်သင်ရုံ "အနုတ်လက္ခဏာ" သို့မဟုတ် "အပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေးခေါ်ဝေဖန်နေကြသည်လျှင်။ ရိုးရိုးသားသားဖြစ်ရန်: ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် (အကြမ်းအားဖြင့်) ငါ၏အ 40e များအတွက်နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်မဟုတ်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ခုခုပေါ်တွင်ဖမ်းမိပေမယ့်မဟုတ်ရင်ကြောင့်ကောင်းသောငွေရှာဖို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်ကအရသာရှိတဲ့ရက်ရက်ရောရောဖြုန်းနိုင်ဘူး။
သို့သျောလညျးတစ်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်မြုံနှင့် ပို. ပို. သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းကတဆင့်မောင်းနှင်နေတဲ့ရဲကိုပြည်နယ်ဆီသို့ဦးတည်သောအလင်းထွန်းညှိပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ငါရိုးရှင်းစွာမဟုတ်တော့ကျနော်တို့ရဲ့ပြည်နယ် setting ကိုညှပ်ဆက်လက်ထားပြီးဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မယ့်လစာကောင်းအလုပ်နှင့်အရောင်းမန်နေဂျာ၌မတည်နိုင်။ ငါတကယ်မည်သူမဆိုကြောင်းရွေးချယ်မှုလုပ်သင့်ကြောင်းစဉ်းစားကြဘူး။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်သူတို့၏နေအိမ်များဆုံးရှုံးသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်သင်တို့ပတ်လည်ထောင်ထဲမှာအများကြီးပိုအန္တရာယ်များရေတိုရေရှည်မသေချာမရေရာမှုများထက်ယခုသင်မျိုတဝိုက်တည်ဆောက်။ အဘယ်ကြောင့်ငါဆိုကြသနည်း ဒါကြောင့်။ ဒါဟာဝေး ပို. ပို. လွတ်လပ်ခွင့်ယူ, ပိုပိုပြီးဥပဒေများ (ပေါင်းသည်ဤဥပဒေများကိုအဆိုတော်နှင့်စာရင်းစစ်) ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့လူတိုင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်း traceable နှင့်သင်အခြားသူများအကူအညီဆပ်လျှင်ပင်အပြစ်ပေးသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကရဲပြည်နယ်ကိုသွားပါ။
ကျွန်တော်တစ်ဦး cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုချင်းစီငွေပေးငွေယူသည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်မှတဆင့် traceable သည်ဆိုပါက, သင့်အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအသေခံထိုးနှက်ယခုပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုအတူတကွသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်စစ်ဆေးရေးသူတို့အတူတကွနေထိုင်ခြင်းနှင့်ပင်စင်လျှော့ချကြောင်းဖော်ပြထားသည်အနားတွင်ပုန်းဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အတူတကွချက်ပြုတ်ရန်အဘို့အယခုပင်လျှင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တစ်ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတစ်ဦးကသင်၏အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးကအခန်းပေးဘို့သင့်ကိုအတူတကွနေထိုင်နေကြပါတယ်သင့်အိမ်ရာအကျိုးအတွက်, အခွန်အကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးသငျသညျအသကျရှငျဒါပေါ်နေကြသည်ဟုခံစားရဖြတ်နိုင်သောကြောင့်ယခုပင်လျှင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ပင်သင့်ရဲ့ DNA ကိုအဆိုပါဒေတာဘေ့စနှင့်သင့်စမတ်ဖုန်း၌သငျမှတ်တမ်းများယူတိုင်းခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် (အ pedometer အများအပြားပြီးသားရေပန်းစားသည်), သငျသညျန်းကျင်သောသူသည်, သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းနှင့်သင်များမှာအတိအကျဘယ်မှာသိပါသွားကြသည် ထို့နောက်သင်ပြည်နယ်မှအစီရင်ခံရန်သူတစ်စုံတစ်ဦးကကူညီမှုအတွက်အပြစ်ပေးပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, သင်ရွေ့လျားနေကြသည်စျေးဆိုင်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံပဲသငျသညျဝယ်ရောင်းသောအရာကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်သော, သင်တော့ဘူးမဟုတ်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုအသိပညာ, နို့ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်စက္ဏူထူပေးနိုင်ပါသည်။
အနားတွင်ပုန်းသင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလူဝေးစွာရှောင်သိမ်းထားချင်တဲ့လူမှုရေးအကြွေးစနစ်, တည်ဆောက်နေသည်။ တရုတ်ရိုးရှင်းစွာဒီစနစ်ဖြစ်ပါသည် unabashedly မိတ်ဆက်။ နယ်သာလန်နှင့်အီးယူ၏ကျန်ပိုပြီးသိမ်မွေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ webshops အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမှတဆင့်ဤတွင်သမိုင်းပညာရှင်လေ့ကြိုတင်မဲ, Airbnb, Linkdin နှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုမီဒီယာ။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်သို့သော်ပြီးသားသင့်ရဲ့အရေးယူမှုနဲ့ (ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်၏အခြေခံအဆောက်အအုံတဆင့်) ခြေရာခံသမျှသောဤခြေလှမ်းများကိုသင်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြကြောင်းတာတော့သေချာတယ်မုသားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုလျှင်, သင်တစ်နေ့တာအသုံးစရိတ်ပုံစံတလျှောက်လုံး, သင့်ဘဏ္ဍာရေးအသုံးစရိတ်အလေ့အထများနှင့်သင့်လူမှုကွန်ယက်တာတော့သေချာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းများမှာနိုင်ပါတယ်။ အရာအင်တာနက်ကမ္ဘာ 'နှင့်သင် (မုန့်ရန်, အဖြူကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေမှ, အသား) ကိုဝယ်အရာအားလုံးအပေါ်ကြိုးမဲ့ DNA ကို tags များ၌သင်အရာအားလုံးကိုမဝယ်သောအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသေးစိတ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်, ရောင်းချနှင့်စားသုံးကြသည်။ သင့်ရဲ့အကြွေး (ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက် Bitcoin ကဲ့သို့ငွေကြေးကို၏ပုံစံ) အကြာတွင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်" ၏ပြည်နယ်အားဖြင့်ဖြစ်မပယ်ရှားသို့မဟုတ် "မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်" နဲ့လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံခဲ့လျှင်သင်အပြန်အလှန်အဘယ်သူကိုနှင့်သင်၏ကိုယ်ရံတော်သွားပါလိမ့်မယ် ။
သောသူအပေါင်းတို့သည်တဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီးဖွယ်ရှိသင်ပေါင်းသင်းဘယ်သူကိုအတူနောက်ဆုံးမှာသင့်ရဲ့စားသုံးမှုအမူအကျင့်အပေါ်မူတည်ပြီးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းပရီမီယံတူသောအရာနှင့်စတင်ဖို့ပေမယ်ပါလိမ့်မယ်။ စပျစ်ရည်သောက်သို့မဟုတ်မီးခိုးအမှန်ပင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသူလူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရာတွင်။ ငါကဒီမှာသင်ဆဲပယ်ချလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီသင်ထင်ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပြီး, ထိုလူတစ်ဦးနွားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဟန်ရှိသောကြောင့်, ငါတို့အကြိုက်၏ system ပေါ်တွင်လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့် fixed နေသားတကျထားကြပါတယ်, ကချိတ်ဆက်သို့မဟုတ် Instagram ကိုမှတဆင့်ပါဘူးဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုဖျောပွ , Snapchat နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအမျိုးမျိုးတို့ကို '' ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း '' တာဝန်ပေးဖို့။
ဒါဟာယာဉ်မောင်းလိုင်စင် afstraffingssysteem အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးသာဓကဖြစ်တယ်ထောက်ပြသည်။ နှင့် ပို. ပို. အရာသည်လူအပြစ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အကြွေးစနစ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းများ၏ traceability ဆီသို့ ပို. ပို. ကြီးသားအပေါင်းတို့, မျက်နှာစာပေါ်သွားပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီဖတ်နေလူအများစုအတွက်အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်စည်းမျဉ်းများအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းစနစ်များကိုတည်ဆောက်ကိုယ်နှိုက်ကကူညီစေခြင်းငှါမှန်သည်။ အခြားသူတွေ leiden ဤအတာဝန်များကိုကျေပွန်အတွက်မျိုးဆက်သစ် op ဝေဖန်မှုများနှင့်နာခံရန်။ အဆိုပါ leash ကလေးကလူ့အဖွဲ့အစည်းရိုက်နှက်ထားတဲ့အတွက်ဦးတည်ရာဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းသည် leash ပေါ်မှာကျနော်တို့က leash ပျေါမှာရှိကောင်းပါတယ်အတူတကွသင်ယူကြသည်။ ကျနော်တို့ leash အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစစ်ဆေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နေကြသည်လျှင်အိမ်နီးချင်းအပြစ်ပေးဖို့တဝိုက်ဗိုလ်ခြေလမ်းလျှောက်။ အခြားသူများကကြီးမားကျယ်ပြဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်များစုဆောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီးတိုင်းမိမိသစ်ပင်အိမ်သူအိမ်သားသားရဲနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နည်းနည်းပန်းခြံကယ်ဖို့လိုလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာကောင်းမွန်စွာတော၌ထားသောစက်ကိုပြန်သွားလေ၏။ ကျနော်တို့ '' တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုပြောပြleash ကောင်းမကောင်းလုံခြုံ'' ။
သငျသညျအရေးယူသို့ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်အချိန်မရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာနေဆဲကယ်တင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကလုပျနိုငျကွောငျးကိုစဉ်းစားရန်စမတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရအများနှင့်အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီ, အ encroaching ထောင်ထဲမှာမော်ဒယ်များ၏အကြောင်းရင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာဏာရှင်ရဲကိုပြည်နယ်: နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် system ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးနေအတိုင်း, သင်အမှန်တကယ်ကြံနှင့်သင့်သားသမီးများရန်သင့်မွေဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျတစ်ခုခုလုပ်ရန်မကြိုးပမ်းလုပ်အဘယ်ကြောင့်သင်၏သားသမီးမကြာမီမေးလိမ့်မည်ဆိုပါက: သင်၏အဖြေကဘာလဲ? "ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါ"? အကယ်စင်စစ်သင်သည်တစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့်သင်မယ့်အလုံအလောက်တွေးတောဆင်ခြင်လျှင်အရာရာချောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသင်၏အပေါင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်မိစ္ဆာအယူအဆပေါ်တွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်, ဆုတောင်း, ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာအငှားသင်၏အပြစ်သည်ကိုအသုံးပြု ချွေးသိပ်။ "ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ခုခုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားလျှင်ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အလုပ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်ငါ၏အစက်အပြောက်များယူနှင့်မျှမတို့ပြောင်းလဲမှုရှိ"တစ်ဦးငြင်းခုံသည်မဟုတ်။ ဒါကကိုယ့်ကိုကိုယ် excuse နှငျ့သငျစုပေါင်းသဘောထားကိုများ၏စံချိန်စံညွှန်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုသဘောထားကယူပါ။ သင်တို့ပတ်လည်အများကြီးသံသယသစ္စာဖောက်အကြောင်းကိုစကားပြောမရ (ကြည့်ရှု ရှင်းပြချက်).
ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (သောကုလားကာတစ်ထောင့်အထက်) အပေါ်ကိုသွား, ပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘာ၏အသိပညာနှင့်အတူစတင်သည်။ သည်သင်အမှန်တကယ် (တွေ့မြင်အသက်ရှင်ရန်ဝိညာဏ်သစ်တစ်ခုအဆင့်ကနေလိုအပ်ပါတယ် ဒီမှာ) ။ သင်ကမဟုတ်ရင်သင်နောက်တစ်ကြိမ် (ဝိညာဏ) palliative လက်ဆေးရန်, အလေ့အကျင့်သို့သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့။ ဘတ် ဤဆောင်းပါးတွင် သင့်အသက်တာ၌အခိုင်အမာသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရှ။ တကယ်တော့သင်ကသင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုမီးပေါ်မှာဖြစ်ပြီးမီးပေါ်ပေါက်လျှင်သင်ပြုမယ်လို့အဘယ်အရာကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မမေးသင့်တယ်: သင်ထိုင်နေဖို့နှင့်မီး untamable ဖြစ်လာသည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းကြဘူး, ကသိပ်နောက်ကျမယ့်သည်အထိသင်သည်စောင့်ဆိုင်းလျှင်မီးငြိမ်းအေးဖို့ကြိုးစား အိမ်သူအိမ်သားမပြေးဖို့ ပို. ပင်ဖြစ်သနည်း အရေးယူဖို့အချိန်!
ဒီ site ကနေဆောင်းပါးတွေကိုမျှဝေခြင်း Facebook ကပိတ်ဆို့ထားပုံရသည်။ သင်ကမျှဝေလျှင်ဒီတော့သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရိုးရှင်းစွာနေတုန်းပဲသူတို့ရဲ့သတင်း feed ကိုများတွင်မမြင်မိပါဘူးဆောင်းပါးရယူပါ။ အချိန်တက်ကြွစွာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူတို့ကိုတိုက်ရိုက် e-mail, အားဟောပြောသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးများမှလူတို့အဘို့ရောက်လေပြီ။ ဒါကပြီးသားအပြောင်းအလဲကို start ကိုကူညီစတင်လိမ့်မည်။ ဤ site သင်တို့ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်န်းကျင်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဘယ်အရာကိုသင်သတိပြုမိပါစေကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ကတစ်ခုခုလုပ်, သင်၏လိုက်လျောညီထွေနေချိုး။
Tags:: အထူးပြုလုပ်ထားသော, စိတ်ဓာတ်, မလှုပ်မရှားနေသော, ရိုက်ပုတ်
2 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 12
ယင်းဆောင်းပါးနှင့်အတူလုံးဝပေါ်မှာပြုမူဖို့အချိန် Concur ..
2 မှဇူလိုင်လ 2019 15: 49
မှန်လိုက်လေဗျာ ... ဒါပေမယ့်အများစု။ မြေတပြင်လုံးကိုနားလည်ရန်နှင့်တဆင့်ကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်မရှိပါ။ ဘယ်လိုမကြာခဏသူတို့လညျးအမှုအရာမှထောက်ပြကြပါ။ ဒါဟာထိုးဖောက်မထားဘူး။ သငျသညျ Roald သစ်ပင်ဟုခေါ်တွင်သည့်သင်၏ယခင်အပိုင်းပိုင်း၏တဦးတည်းကအောက်ပါ။ ငါသည်သူ၏သင်ပြွန်ဗီဒီယိုများအချို့ကိုပိုပြီးစောင့်ကြည့်, သူသည်သူ NPCs (Non-ကစားဇာတ်ကောင်) အဖြစ်လူသားအားလုံးကိုမြင်တော်မူသော filmje အတွက်အတော်လေးကြင်ကဖော်ပြသည်။ အမှန်တကယ်ဂူ၏ပလေတိုရဲ့ရူပကတှေတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ဗားရှင်းကဘာလဲ။
2 မှဇူလိုင်လ 2019 17: 04
2 မှဇူလိုင်လ 2019 17: 44
ကျွန်မအမှန်ပင်ကိုဖတ်ခဲ့ဘူး ... ကိုယ့် slleen ရဲ့မစိတ်ဓာတ်ထင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအမေရိကန်များ၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုသို့မဟုတ်သမျှသမျှနိုင်ငံသားအဖြစ်။ သင်လာသောအရာကိုအငြင်းပွားမှုများ, မျှတမှုစသည်တို့နှင့်အတူသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါအလင်းမီးဘယ်သူမှဒါပေမယ့်အိမ်မှာပါပဲ။
2 မှဇူလိုင်လ 2019 22: 40
သငျသညျတခုဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံး "ကွယ်လွန်သူ" ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူသတင်းစာ၏အယ်ဒီတာအဖြစ်ပါလျှင်
ဒါမှမဟုတ်သင်အဘယ်သူမျှမချစ်ရသူရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေဆဲဘယ်သူသိ, အဘယ်သူမျှမခုခံရှိလိမ့်မည်ကိုသိရှိပါသလား ကျနော်တို့မသိရပါဘူး
တစ်ဦးကအထူးတပ်ဆင်နေရာဝမ်းနည်းကြောင်းစဉ်အတွင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဲဒီမှာခဲ့သလဲ။ စောင့်ဆိုင်း !!! အဘယ်ကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမကြိုတင်မဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုရှိ၏, စာနယ်ဇင်းအမှန်ပင်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုခဲ့ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ 17miljoen လူတွေကမီဒီယာ / ပါဝါ / ရဲများ၏ရှင်းပြချက်, ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူသွားပြီသတိမထားမိဖြစ်ကြပြီးင့်လင်းမြင်သာသောအခွင့်အရေးရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကပ္ပတိန်တစ်ဦးသတင်းကွန်ဖရကြားရကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ uberhaupt သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအားလုံးမီဒီယာ (ဖြတ် & ငါးပိဖိုရမ်များ) တွင်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအအာရုံစူးစိုက်မှုအပြီးရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်သင်္ဘော / လှေ၏အမည်ကိုလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်လွှဲပြောင်းဖို့ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ / ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မဟုတ် marrechaussee မရှိပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ပတေရုသ R ကိုက de Vries အင်ယာဖြစ်ကောင်းသတ်သေပြောပြရပေမည်။ အင်ယာကယ့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာဖြစ်စဉ်အခါ, အဘယ်ကြောင့်မီဒီယာအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားထားပြီးပါဘူး။
တစ်မိသားစုအခမ်းအနားတစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုကျင်းပအများပြည်သူမသေချာမရေရာပြီးခဲ့သည့်အစည်းအဝေးပြီးနောက်အပြာရောင် Bock အတွက်ပူးပေါင်းအဘယ်ကြောင့်ပထမဦးဆုံး ons တွေကိုက familly သောက်ခဲ့ကြောင်းအကြောင်းကြားနှင့် "တစ်စုံတစ်ဦးက" သူတို့မိသားစုတစ်ဦးတက္ကစီကို ယူ. , သေးဟုဆိုသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ယူခဲ့ပါတယ်။
မရှိကပိုဂျာနယ်လစ်အပေါင်းတို့နှင့်ဖြတ်နေကြသည် & paste အကယ်. ဖြစ်လာ? Katwijkers အချင်းချင်းမေးခွန်းများကိုမေးရန်ချီတုံချတုံ။
သာရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် (Dick Goijert) 17 လူဦးရေသန်းဇာတ်လမ်း၏နားရွက်မှယူဆောင်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူကျနော်တို့သိက္ခာနဲ့တူယုံကြည်ဖို့ထွက်ခွာသွားကြသည်
ဤတွင်ဒစ်ခ် Goijert ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဇာတ်လမ်း
3 မှဇူလိုင်လ 2019 08: 58
ကိုသာပုံကြီးချဲ့မီဒီယာ aaan အတွေးသံသယခဲ့လျှင်အမှန်ပင်တစ်ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်ကျိန်းသေမှန်ပေမယ့်မီဒီယာအာရုံစိုက်မှုမကြာခဏအလွန်ကန့်သတ်သည်, တခါတရံတွင်မယ့်ဒေသခံသတင်းစာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်ကန့်စဉ်းစားထားတဲ့ပိုပြီးပျောက်ဆုံးမှုများရှိပါတယ်။ သတင်းစာတွေအသစ်သောပစ္စည်းများများ၏ဖော်ပြချက်နှင့်သာမန်အာရုံစူးစိုက်မှုထက်ပိုပြီးဖြစ်ကောင်းအတုဇာတ်လမ်းဖြစ်သည့်တရားခံထို့နောက်ပေးထားလျှင်အလွန်ရွေးချယ်ကျနော့်အမြင်၌ရှိကြ၏။
3 မှဇူလိုင်လ 2019 08: 49
ကျွန်တော်ကျွန်မရုပ်ရှင်မြင်ကဝင်ကမ္ဘာကြီးကိုအဖြစ်ထို့နောက်ဆိုပါတယ်င့်ကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာသွားကြသည်ဘယ်မှာ 1993 ကနေရုပ်ရှင်ဖြိုဖျက်က Man ၌သင်တို့ကိုအလွန်ကောင်းစွာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အခုတော့ 2019 အတွက်အမှန်ပင်ကြှနျုပျတို့သညျဤအလွန်မှန်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။
အဆိုပါဆေးလိပ်သောက်မူဝါဒအကောင်းတစ်ဥပမာ, သက်သတ်လွတ်အစားအစာဖို့တွန်းအားပေးသည်။ အဆိုပါအရက် consumtie မကြာမီဒါအပေါ် curbed နှင့်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လောက်ဝေးကျနော်တို့နေဆဲသင်သည်နံနက်စကင်ကိုအောက်ပါ 3D ပုံနှိပ်သောရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့မြင်ဘာလည်ချောင်းနာငါးပိရှိပါသလဲ
ရုပ်ရှင်များတွင်သင်မြို့ရိုးမှသေးငယ်တဲ့ပရင်တာကနေလာသောသငျသညျကျိန်ဆဲသို့မဟုတ်ကျိန်ဆိုသောခဲ့ကြသည်လျှင်ပြစ်ဒဏ်များ, တယ်ဘယ်လိုမြင်တော်မူ၏။ အခုဆိုရင်အစားချော၏ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်နိုင်ငံတွင်တဲ့စနစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပရင်တာကို SMS ကနေတဆင့်လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်။
ဤအတောအတွင်း uitest စိုးရိမ်စရာဖှံ့ဖွိုးတိုးပေမယ့်အများအပြားအရေးမကြီးများအတွက်, သငျသညျသူတို့အားမိသားစုများသိ? ကောင်းသောအလုပ်, စျေးကြီးအိမ်တော်ကိုအဘယ်သူမျှမဆေးလိပ်သောက်, အရက်မသောက်နဲ့သက်သတ်လွတ်စားခြင်း။ ဘာမှနှင့်အရာခပ်သိမ်းနဲ့ဘာမှနှင့်အရာအားလုံးကိုထိုကွောငျ့မတည့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေးထိုးကလေးများ။
ဒါဟာအနာဂတ်မှာလူတွေဖြစ်ကောင်း virtual reality အမှီမပြုလျှင်အဘယ်သူမျှမကပိုပျော်စရာပါစေခြင်းအလိုငှါပုံရသည်။
3 မှဇူလိုင်လ 2019 10: 06
Madurodam, ထိုသတ္တိကမ္ဘာသစ်။ ဤတွင်လူတွေပဲစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးနေထိုင်ကြသည်။ တောင်မှသူတို့၏ "စိတ်ခံစားမှု" အေးစက်လျက်ရှိသည်။ ထိုအကအကြောင်းနိုင်ပါတယ်စဉ်းစား
အားလုံးဟင်းရည်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးအတုဖြစ်ပါသည်, အရာအားလုံးကဒီမှာညွှန်ကြားထားသည်။
ပင်ပေါင်းပင်ပေါင်းပင်ပေါင်းပင်ဖြစ်တားမြစ်သည်ကြသောအခါအချိန်ရှိပါတယ်ရောက်လိမ့်မည်။ ပေါင်းပင်, ပုနျကနျသင်္ကေတဖြစ်သောကြောင့်ဇာတ်ညွှန်း၏ယောက်ျားလေးများများအတွက် script ကိုကနေယောက်ျားတွေရဲ့ system ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုပင်ဖြစ်သည်။
4 မှဇူလိုင်လ 2019 20: 02
ငါအရေးယူမှုမှငါ့ကိုတားဆီးသောအတားအဆီးသတိထားဖြစ်လာယူပါ။ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ကောင်းမာတင်ကံကြမ္မာ .... ငါတုံ့ပြန်မှုကိုဖတ်ပြီးအဖြစ်နှင့်အညီ, အနည်းဆုံးအမည်များမှာ, (သေး) ကပိုရှိပါတယ်ပွင့်လင်းအတွက်တုံ့ပြန်ရန်ဝံ့, ငါအဘယ်သူမျှမကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်ဆိုလို, ငါကျိန်းသေစကားကိုနားထောငျ!
5 မှဇူလိုင်လ 2019 11: 34
အဲဒီမှာ Go ပေမယ့်ဇာတ်ညွှန်းန်ဆောင်မှုများ၏ယောက်ျားလေးများကယ့်ကိုအဘယ်သူသည် Siep နှင့်ဤ site ပေါ်တွင်အခြားပိုစတာကိုသိသော။
မာတင်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အရေးပါန်ဆောင်မှု post ဝံ့ဖြစ်နိုင်သည်သူကိုအလားအလာနရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရိုးရှင်းစွာသောဤ comments ကျွန်တော်တစ်ဦးအာဏာရှင်စနစ်မှာနေထိုင်ကြောင်းအပြည့်အဝကောင်းစွာ, တစ်ဦး sneaky, သိမ်မွေ့အာဏာရှင်စနစ်သိသောကိုဆိုလိုသည်။
5 မှဇူလိုင်လ 2019 18: 49
ဒါဟာငါ '' န်ဆောင်မှု '' ထိုင်လျက်အကြားတစ်ဦးက hidden အစီအစဉ်နှင့်အတူမလူတစ်ယူဆ, ငါ့ထက်ပိုချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်ရန်သတိပြုပါ, ငါ့ကိုပါပဲ။ သူတို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ရန်ဒီနေရာကိုလာသောသူကိုသိပေမယ့်နှင့်အညီ, သူက (နေဆဲ) သင့်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်အမည်မသိဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်မယ့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေစဉ်ကိုဘယ်လိုလူတွေ "သတိ" အကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလဲ »
IVF နှင့်ကာကွယ်ဆေးများသည်မျိုးရိုးဗီဇကလေးများမျိုးဆက်များသို့ ဦး တည်သွားပြီလား။
ZalmInBlik op IVF နှင့်ကာကွယ်ဆေးများသည်မျိုးရိုးဗီဇကလေးများမျိုးဆက်များသို့ ဦး တည်သွားပြီလား။
မာတင် Vrijland op ဘာကြောင့်မူလစကြ ၀ universeာသည်သင်၏မူလနေအိမ်ဖြစ်သည်
simsalabim op ဘာကြောင့်မူလစကြ ၀ universeာသည်သင်၏မူလနေအိမ်ဖြစ်သည်